यी खाना खाएको तुरुन्तै ब्रस गर्नुहुँदैन - IAUA
यी खाना खाएको तुरुन्तै ब्रस गर्नुहुँदैन
ramkrishna October 22, 2017	यी खाना खाएको तुरुन्तै ब्रस गर्नुहुँदैन
प्राय मानिसको खाना खाएपछि दाँत माँझ्ने बानी हुन्छ । तर भर्खरै फलफुल, चिसो पेय पदार्थ, मदिरा र अन्य एसिडयुक्त अन्य अमिला खानेकुरा खाएपछि तुरुन्तै ब्रस गर्नुहुँदैन ।दाँतको इनामेल एसिडले नरम बनाएको हुन्छ । सोही समयमा दाँत माझ्दा दातको रंग जान्छ ।
तसर्थ यस्ता खानेकुरा वा फलफुल खाएको एक घन्टापछि मात्र दाँत माझ्नुपर्छ ताकी दाँतको एसिड तटस्थ भएको होस् । अमिलो अचार खानामा समावेश छ भने पनि तुरुन्तै ब्रस गर्नुहुँदैन ।gulfact
Previous Previous post: कम्प्युटर भाइरस भनेको के हो ? यसले कसरि असर गर्छ ? अवस्य जान्नुहोस
Next Next post: बाँसको तामा खानुका फाइदै फाइदा ! क्यान्सर, मधुमेह, मुटु रोग, अल्सर जस्ता अनेक समस्याका लागि ‘साइलेण्ट डाक्टर’